Izindaba - I-Genius ihlanganisa izingxenye ze-hydraulic ze-Shimano Di2 ne-SRAM
I-Genius ihlanganisa izingxenye ze-hydraulic ze-Shimano Di2 ne-SRAM
Wenzani lapho imboni yamabhayisikili ingakwazi ukwenza izingxenye ezihlangabezana nezidingo zakho ezithile? Uma ungunjiniyela wokuklama nesazi se-pneumatic uPaul Townsend, uzokhiqiza imikhiqizo yakho bese untshontsha izingxenye zemikhiqizo encintisanayo.
UPaul uphawule ngokusebenza kwezobuchwepheshe bomgwaqo (ngamabhuleki erimu wokubacindezela) ngesithombe sakhe esihlukile se-SRAM-Shimano hacker, kumele sifunde kabanzi.
Kwasekuqaleni kuka-2016, imakethe yeqembu lomgwaqo yayibukeka yehluke kakhulu kunamanje. IShimano ayikayethuli i-disc yayo iDura-Ace R9170 ne-Di2 combo kit (okungezona uchungechunge R875 izinduku zokuthokozisa namabhuleki afanayo ukuphela kwendlela ongakhetha kuyo u-hydraulic / Di2), kanti iRed eTap HRD ye-SRAM isasele nezinyanga.
UPaul wayefuna ukusebenzisa amabhuleki erimu wokubacindezela ebhayisikili lakhe lomgwaqo, kodwa akazange aneliseke ngabakwaMagura brake calipers.
I-lever ye-SRAM ene-hydraulic rim brake inezaphulelo eziningi. Ungumuntu othanda u-gearbox kaShimano Di2, ngakho-ke uthathe isinqumo sokuhlanganisa laba babili babe yi-DIY mashup eyingqayizivele.
Lokhu kufaka ukuhambisa isigwedlo sebhuleki nomhlangano wenkinobho yokushintsha nemishini ehambisanayo ye-elekthronikhi isuka kusethi yezinti zokuthokozisa zikaDi2 iye emzimbeni we-SRAM wokubacindezela emgwaqeni.
Uhlelo lwe-SRAM hydraulic luhlala lungashintshiwe, kepha luqhutshwa yi-Shimano lever blades, futhi ukushintshwa kwamagiya kusekelwe ngokuphelele ku-Di2.
Ngibuze uPaul imibuzo ethile ukuze ngifunde kabanzi ngokusetha kwakhe okungavamile: usebenza kanjani, imvelaphi yakhe yobunjiniyela, nokuthi yini elandelayo. Impendulo kaPaul ihlelelwe ubude nokucaca.
Ngaphambi kokuqhubeka, kufanele siveze ukuthi ukuguqula uhlelo lwakho lwamabhuleki nganoma iyiphi indlela kungadala ukulimala okukhulu, futhi asikukhuthazi ukuthi wenze lokhu. Ukulungiswa kwezinto ngokuvamile kuzokwenza newaranti yomenzi ingasebenzi.
Kusukela ngawo-1980, bengigibela ibhayisikili ngenkathi ngifunda ubunjiniyela bemishini eCoventry Poly University. Ngaleso sikhathi ngangineTopanga Sidewinder nebhayisikili lezintaba iMick Ives.
Ngisebenze ekwakhiweni kwamabhayisikili nakwisethingi yangokwezifiso, futhi ngibe ngunjiniyela wokuklama kanye nochwepheshe womoya isikhathi eside. Ngiguqule nezimoto namabhayisikili iminyaka eminingi.
BengineCanyon Ultimate ngo-2013 futhi bengilokhu ngithanda ubuchwepheshe, ngakho-ke okokuqala ngakuhlomisa ngeqembu lekhebula langaphandle leShimano Ultegra 6770 Di2.
Ngibe sengithuthukisa amabhuleki ngazama amabhuleki erimu abizwa ngokuthi yiMagura RT6. Uma ngikhuluma iqiniso, bekunenkinga, futhi bekuyinkinga ukufaka nokufaka.
Ngenze i-clutch derailleur yesithuthuthu sami engisemgwaqeni futhi ngafaka i-Formula RR clone disc brake kuso ngokushintshwa kweDi2. Kusebenze kahle, kepha ngalesi sikhathi, intengo yama-bram hydrim rim hydraulic rim kanye levers ku-Planet-X ibiphansi ngokuhlekisa.
Ngemuva kokutadisha ukuthi izingxenye ze-SRAM zihlangana kanjani futhi ngazi isikhala esidingekayo se-module ye-Di2, ngathenga ukubopha ibhande le-HydroR ngo- £ 100. Kamuva, ngathenga amanye amasethi amane, ozakwethu nomuntu wase-United States.
Esikhathini esedlule, ngiphinde ngenza amasondo namabhuleki we-Gravity Research Pipe Dream-style V ezithuthuthu zami ezingekho emgwaqeni, ngabe sengenza amashup kwamanye amanye amabhayisikili.
Ngakho-ke, umbono wethu uwukuthi: amabhuleki e-hydraulic disc anokuthinta okunothile nokusebenzisa okuncane. IMaguras ibuhlungu futhi iyaphoxa, ngakho-ke uma ngifuna ukuhlomisa ibhayisikili lomgwaqo ngamabhuleki erimu wokubacindezela, ngingakhetha i-SRAM, kepha ngithanda iDi2.
Kunzima kangakanani ukuhlanganisa lezi zinto ezimbili? Ngemuva kokukhipha indlela yokushintsha ijubane, kunembobo enkulu emzimbeni wenduku ye-SRAM, ngakho impendulo ithi: ilula kakhulu.
Ngathenga amasekondi angama-6770 Di2 angamasekeni. Ngoba i-Ultegra 6870 Di2 enejubane elingu-11 ingumkhiqizo omusha, abantu abaningi bathengise ngephutha i-lever ye-6770 gear ukuze ithuthukiswe [iphutha ngoba i-6770 empeleni ingasetshenziswa nge-6870 derailleur]. Ngicabanga ukuthi ngithenge isilinganiso sama- £ 50.
Ukusetha kwami ​​kusebenzisa imbobo ye-pivot ekhona ku-Di2 brake lever, bese iphusha izingxenye zensimbi neze-plastic prototyping (3D ephrintiwe) ezisheshayo ze-Di2 brake lever ku-cylinder brake master, ngakho-ke amandla esakhiwo ngeke abe phezulu kakhulu. umbuzo OWODWA.
Nginqume ingxenye eyeqile kusuka phezulu kwesibambo se-6770 Di2, ngayicubungula ngomshini, ngabe sengiyinamathisela engxenyeni esetshenzisiwe esheshayo ekhishwa ngenayiloni.
Ngiwuqambe kabusha umgodi ngenza umgodi ubushelelezi nosayizi ofanele. Ngopende omncane, noma i-Shimano grey-green nail polish kuleli cala, ngilungele ukuhlanganisa yonke into.
Leli lungiselelo alisebenzisi isipele sokubuyisa induku noma i-E-clip ukulungisa ishafula, ngakho-ke kushaftwa kushajiwe bese kuthephelwa ukuthola isikulufa esiphikisayo ikhanda laso likhulu kunephini le-pivot. Uma umzimba wesigwedlo nawo ucwila kancane, ikhanda liyagungqa.
Intwasahlobo yokubuyisa eyindilinga ingezwa kubhuleki oyi-master cylinder shaft ukuhlinzeka ngamandla okubuyisa isigwedlo.
Ngemuva kwalokho, okuwukuphela kokulungiswa engikwenzile kwaba ukufaka i-O-ring encane enqamulelayo endaweni endala ye-E-clamp yephini le-pivot ukuvikela ama-lever blade blver angantengantengi kancane.
Ikhebula le-Di2 linwebela emgodini ohlangothini olungezansi kwekhanda lepulasitiki eliphrintiwe le-3D le-lever brake, ngakho-ke lilungisiwe futhi ngeke linamathele noma ligugwe.
Ngemuva kokususa zonke izindlela zokushintsha, okuwukuphela kwendlela yokuguqula izingxenye ze-SRAM ukufaka ama-grooves wokubeka ikhebula le-Di2. Imodyuli ye-Di2 ilungiswe ngesiqeshana segwebu esikhaleni ngemuva.
Ngiphinde ngasebenzisa uhlelo oluqhekekile lweshifter shifter, ngixhuma iswishi yakudala yeDura-Ace 7970 Di2 kusuka kushintshi le-SW-R600 lokukhuphuka lokuya kumodyuli ye-elekthronikhi, futhi konke ukushintshwa kuxhunywe endukwini yangakwesobunxele. Intambo inwetshiwe ukuhlinzeka ngesixazululo esihle se-plug-in, futhi lapho ngigijimisa ukusethwa kwesibambo esihlanganisiwe seCanyon, ibhokisi leJunction'A'Di2 ku-shaft lalikulo.
Amabhuleki anokufakwa kwe-titanium namabakaki wephedi alula. Zibekwe kuhlaka lwama-52 cm. Isisindo esiphelele samasondo angaphambili singu-375g, isisindo esiphelele samasondo angemuva singu-390g, kanti isisindo esiphelele samasondo angemuva singu-390g.
Yebo, ngifuna ukusho ukuthi kube yimpumelelo. Ngithengise isethi kumuntu oseHong Kong, obuye wangithumela i-SRAM Red noDura-Ace ukwenza le mashup.
Ngathengisa enye isethi yemishini kumuntu wase-Australia ukuba ayisebenzise ebhayisikili lakhe le-TT, ngathengisa ingxenye eyodwa kwezintathu kumuntu wase-United States, ukuze ngikwazi ukukhokha zonke izindleko zami.
Uma ngikhokha inani eligcwele lakho konke lokhu, kungaba yingozi enkulu. Ngaphezu kwalokho, ngingahlala ngibuyisa izingxenye ze-SRAM esitokisini ngokushintshwa kwemishini ngaphandle kwezinkinga.
Mhlawumbe ngizonikeza isigwedlo intwasahlobo yokubuya enamandla. Ngidinga ukhiye wentambo ukumisa ushintsho ebangeni lokuhamba ngesikhathi sokushayela, ngoba ngiyisikulile ngokuphelele isihlanganisi sebhuleki futhi ngiphuce ukhiye wokuqala wentambo.
Yebo, ngakha ezinye izinsimbi ezintsha zokukhuphuka kwamatshe nezokuphrinta, futhi ngifuna ukuhlelwa okuhlukile lapho isigwedlo sangaphambili samagiya sizoba yisigaxa esisizayo, njengezidwedla zesithupha ku-lever yaseCampagnolo.
Umbono wokuqala bekungukuphakama kwesandla sokudla nesobunxele kwesokunxele, futhi ngisazama ukusebenzisa ukuthi iyiphi i-lever blade.
Ngiyakwazi ukunamathela emabhulethini e-flat bram lever blade noma ngisebenzise iCampagnolo, bese ngigcina ama-lever blades e-gearbox we-derailleur yangemuva kanye nama-levers amasha ku-gearbox we-derailleur wangaphambili.
Lokhu kufanele kusho ukuthi ngeke kube khona ukungahanjiswa kahle kwezinto noma ngabe ugqoke amagilavu, okungaba yinkinga ebusika ngaphansi kwezilungiselelo ezijwayelekile zikaShimano.
Ngiyabonga kakhulu Paul ngokuphendula umbuzo wami nokunikeza izithombe. Ukuze uthole amathiphu amaningi ngaye, sicela umlandele kuFlickr naku-Instagram, noma ufunde okuthunyelwe kwakhe ngaphansi kwegama lomsebenzisi elithi motorapido esithangamini se-Weight Weenies.
UMatthew Allen (owayekade engu-Allen) ungumakhenikha onolwazi futhi onguchwepheshe kwezobuchwepheshe bamabhayisikili. Uyakwazisa ukuklanywa okusebenzayo nokukhaliphile. Ekuqaleni wayenguLouis, wayewathanda amabhayisikili nayo yonke imishini yomugqa. Eminyakeni edlule, uvivinye imikhiqizo eyahlukahlukene yeBikeRadar, Cycling Plus, njll. Isikhathi eside, inhliziyo kaMatthew kwakungekaScott Addict, kepha njengamanje uthokozela Isazi Esikhethekile seRoubaix futhi unobudlelwano obuseduze neGiant Trance e-MTB. Ungu-174 cm ubude futhi unesisindo esingu-53 kg. Kubonakala sengathi kufanele abe ngcono kunokuhamba ngebhayisikili, futhi wanelisekile.
Ngokufaka imininingwane yakho, uyavumelana nemigomo nemibandela yeBikeRadar kanye nenqubomgomo yobumfihlo. Ungazikhipha ohlwini nganoma yisiphi isikhathi.